Hay'adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn Ee MSF Oo Soo Afjartay Qorshihii Ay Muhaajiriinta Badda Uga Badbaadin Jirtay
(Hadhwanaagnews) Friday, December 07, 2018 11:31:27
Aquarius ayaa ahaa markabkii u dambeeyay ee ku hawlanaa baadi
Hay'adda Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ayaa lagu qasbay in ay soo afjarto qorshihii ay ku badbaadin jirtay dadka ku tahriibada badda Mediterranean-ka.
Hay'adda ayaa dadka badda ku le'anaya ku badbaadin jirtay markabkeeda Aquarius.
Hay'addan ayaa go'aankeedan ku sababaysay "weerarro uga yimid dalal reeb Yurub oo ku haysta dadka ay badbaadiso"
Markabka hay'addan oo la dhoho Aquarius ayaa ku xayiran magaalada Marseille ee dalka Faransiiska tan iyo markii lagala laabtay diiwaan galintii.
Markabkan ayaa gacan ka gaystan jiray badbaadinta dadka ku tahriiba badda halista ah iyaga oo Liibiya ka baxaya oo ku sii jeeda qaaradda Yurub, gaar ahaanna dalka Talyaaniga.
style="font-size:16px;">Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Talyaaniga Matteo Salvini ayaa hay'addaha maraakiibta ku badbaadiya tahriibeyaasha ku eedeeyay in ay gacan saar la leeyihiin dadka wax tahriibiya. Ayna noqdeen sidii Tax dadka ka soo kaxeeya Liibiya oo keena Talyaaniga".
Aquarius ayaa ahaa markabkii u dambeeyay ee ku hawlanaa baadi goobka dadka ku go'dooma badaha iyo badbaadinta tahriibeyaasha.
MSF oo ku dhawaaqaysa soo afjaridda hawlihii samato bixinta badda ayaa dalalka Yurub oo Talyaanigu u horreeyo ku eedeeyay in ay ku guul daraysteen samaynta qorshe ay iyagu leeyihiin oo dadka lagu badbaadiyo, haddana ay billaabeen xagal daacinta hay'adihii kale ee isu xilqaamay in ay dadka ka badbaadiyaan badda Mediterranean, sida uu ku warramayo wariyaha BBC-da uga soo warrama Qaradda Yurub.
MSF ayaa Twitter ku soo qortay "weerarrada joogtada ah" ee dalalka Yurub "ayaa ka dhigan in dad badan ay ku dhiman doonaan badaha" dad badan oo geeridooda loo baahnaynna ay dhiman doonaan iyagoo aan laga warhayn."